Isaky ny misy fanapahan-kevitra hentitra any an-toeran-kafa amin'ny fialantsasatra, dia mijery tranonkala an'arivony manana fampahalalana isan-karazany momba ilay toerana. Ary tena lojika izany, satria tsy te hanimba ny fialan-tsasatra amin'ny tsy misy ny antsipiriany. Raha ny fandehanana mankany amin'ireo firenena izay voahodidin'ny làlana sasantsasany izay tsy dia tena laza tsara, ny fandrosoana tahaka izao dia miakatra amin'ny ambaratonga - raha ny marina, ilaina ankehitriny ny mamantatra ny zava-drehetra! Bolivia - firenena mahavariana, nentanin'ny natiora sy ny loko. Saingy noho ny lazany, toe-pahasalamana somary mahantra, ka ny ampahatelony dia mifamatotra amin'ny raharaham-panafody, tsy maintsy mitazona ny sofin'ny sofiny! Ary ity lahatsoratra ity dia hanampy anao handrakotra anao lafiny manan-danja toy ny fitaterana any Bolivia.
Raha ny marina dia hanomboka ny lahatsoratra amin'ny famaritana ny serivisy fampitaovana ny serivisy. Ohatra, ny fanontaniana mikasika ny fomba hahatongavana any Bolivia dia vahaolana tsotra fotsiny - mividiana tapakila ho an'ny sidina akaiky indrindra, ary efa any ianao. Ny fitaterana an'habakabaka no fomba fanao mahazatra indrindra any Bolivia, anisan'ireo mpizaha tany sy olom-pirenena mpanankarena. Izany dia notononin'ny zava-misy fa any amin'ny toerana sasantsasany dia tsy azo atao mihitsy ny manatratra amin'ny fomba hafa - na ny lalana misasatra na tsy misy mihitsy. Ankoatra izany, tsy misy tsy fahampian'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny firenena: Viru-Viru, El-Alto, Jorge Wilstermann, ary ny maro hafa.
Ny seranam-piaramanidina serivisy eto an-toerana, misy ny tanàna iray. Ny fiaramanidina airbus azo antoka dia Aerosur, Amaszonas, BoA, GOL, Aerocon ary TAM. Ny vidiny dia azo ekena, fa ny fepetra fisoratana anarana dia mitaky fandaniana fanampiny. Ohatra, ho an'ny fiaramanidina ao an-tokantrano dia tsy maintsy mandoa 3 dolara ho toy ny hetra ianao, ary ny tapakila dia tsy mihoatra ny 120 dolara. Ny sidina iraisam-pirenena dia tsy maintsy mandany betsaka. Ny mpandeha dia nizara kaonty 15 kilao ary entana 3 kg.
Eo am-piandohana, tsara ny milaza aminao ny momba ny lalana Boliviana. Avy any atsimo ka hatrany avaratrandrefan'ny firenena no mandalo ny lalambe Pan-American. Làlana goavambe maromaro mampifandray ny fifandraisana amin'ny tanàna sy ny tanàna sasany. Angamba, hifarana amin'ity "fahasambarana" ity. Ilaina ny ho afa-po amin'ny lalana tsy voavonjy, izay arotsak'orana amin'ny orana matetika. Mba ho resy lahatra kokoa, tokony ho voalaza fa ny halaviran'ny làlana ao Bolivia dia tokony ho 50.000 km eo ho eo, ary 2,5000 kilaometatra monja amin'izy ireo no rakotra asphalt. Tsy misy afa-tsy lalana Yungas iray monja, làlan'ny fahafatesana !
Na izany aza, na eo aza ny toe-draharaha mampahonena toy izany, ny bus dia manana toerana faharoa manan-kaja eo amin'ireo fiara ao Bolivia. Isaky ny tenany, dia mizara ho karazana maromaro izy ireo:
Flotas , na bisy lavitra lavitra. Eto, araka ny fitsipika, misy ny foto-kevitra fampiononana sy fiarovana. Mandritra ny fiara dia afaka mihaino mozika na mijery horonantsary, ary ao amin'ny toby fandroana. Ny karazana sasany mahazatra - bus cama - dia afaka manova ny seza ho karazana fandriana.
Colectivos . Ireo bisy ireo dia tsy mahazo aina kokoa noho ny vondrona teo aloha, saingy lehibe sy malalaka. Mivezivezy amin'ny lalana amoron-dalana izy ireo, ohatra, eo anelanelan'ny tanàna sy ny tanàna. Ny fitsangatsanganana ity fiara fitateram-bahoaka ity, mila miomana ianao fa tsy maintsy mandeha any amin'ny trano iray miaraka amin'ny biby, karazana entana ary olona marobe.
Micros . Ireo no "minibus" mahazatra izay manompo an'ity tanàna ity. Manana lalana mazava sy toerana voatondro izy ireo mba hijanonana, saingy raha ny marina, ny mpamily dia vonona ny hanangona na handao ny mpandeha any amin'ny lafiny rehetra. Ny tena mampidi-doza amin'ity karazana fitaterana ity dia ny mpamily azy. Any Bolivia, feno mpankafy ny mandrindra ny fiarandalamby eny an-dàlambe, mandresy na manapaka bisy hafa, ary manao tsirambina ny fiarovana ny mpandeha.
Amin'ny ankapobeny, ireo mpandeha mandroso amin'ny resaka romanticism dia miresaka momba ny fiara fitateram-bahoaka any Bolivia. Milaza izy ireo fa tsy misy fomba tsara kokoa hahitana ireo toerana mahafinaritra eto an-toerana ary mahatsapa ny fomba fiainany eo an-toerana noho ny fitsangatsanganana eny amin'ny arabe boliviana feno korontana. Na izany aza, rehefa manao dia lavitra toy izany, aoka ho azo antoka fa haka zavatra mafana, antontan-taratasy ary mialoha ny fitsidihana ny toeram-pivoahana. Ary rehefa mandeha lavitra noho ny halaviran-dàlana dia miomàna fa tsy maintsy mandeha amin'ny alina ianao.
Raha ho an'ny minibus kosa, tsara kokoa ny mivezivezy amin'ny taxi miaraka amin'ny fomba fitondra mampidi-doza toy izany any Bolivia. Eto dia fahafinaretana azo tsinontsinoavina, ary maro ny sela nervey hitoetra. Raha ny fitsipi-pitenenana, ny fifanakalozan-kevitra dia mpamily fiarakaretsaka no faly manampy, manamboatra izany, na mitondra fiara amin'ny toerana mahaliana indrindra. Tadidio - mila manaiky ny fandoavam-bola mialoha ianao!
Any Bolivia, afaka manofa fiara ianao. Izany dia handany 400 dolara amerikana mandritra ny herinandro, lahatsoratra iray manokana dia tokony handinika vola mitentina $ 1000 ary fiasana amin'ny fiara (30 dolara hafa). Amin'ny fotoana handaminana fotoana dia mila manana fahazoan-dalana iraisam-pirenena ianao ary karatra fiara miaraka aminao, ary tokony ho 25 taona mahery.
Fiarandalamby any Bolivia
Ny halavin'ny lalamby ao Bolivia dia manodidina ny 3600 km. Mizarazara ho faritra roa ao amin'ny Andes atsinanana izy io. Amin'ny ankapobeny, ity no antony lehibe mahatonga ny tsy fahampian'ny lazan'ity karazana fitaterana ity any Bolivia, satria tsy nahomby ny ezaka rehetra hananganana ireo lalana ireo.
Ny saran-dalana eto dia manam-pahaizana ambany, raha tsy ny tsy fisian-drizareo, ary tsy midika akory ny fomba fitenin'ny "rangahy". Ankoatra izany, dia fomba fohy mihetsika izany. Na izany aza, misy lalamby Boliviana sy ireo tombontsoa azony - fomba hafa mahavariana ho an'ny làlana mangirifiry, ary ny sasany amin'ireo lalana dia tena mahavariana. Ohatra, ny sampan'i Uyuni-Oruro dia tsy hamela na iza na iza tsy hihevi-tena, manintona ny lamaody mahagaga avy amin'ny varavaran-dalamby.
Sandals amin'ny hoditra
Ahoana ny fomba hanodinana ny faran'ny gazety?
Angelina Jolie ho zaza
Ny dysplasia am-behivavy amin'ny sehatry ny fizarana faharoa
Izy ireo no mandravaka ny tontolontsika: ireo vehivavy 10 tsara tarehy voalohany
Fomban'ny akanjo amin'ny fahavaratra
Inona avy ireo vitamina amin'ny tantely?
Ny fitsaboana ny matavy
Fandaharan'asa ho an'ny fahazakana
Baldinini fararano-ririnina 2014-2015
Inona no sakafo mahomby indrindra?
Tato ho an'ny ankizy
Nalefa tao amin'ny Twitter ny tovovavy ary nanala baraka ny tontolo rehetra!